Wednesday August 08, 2018 - 18:48:22 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya gaar ahaan gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ayaa sheegaya in askar fara badan oo Kenyaati ah lagu dilay qarax culus oo lagu beegsaday gaari ciidan.
Qaraxa ayaa gabi ahaanba burburiyay gaari ciidan oo ay lahaayeen milatariga wadanka Kenya ee loo yaqaano KDF, waxaana gabi ahaanba dhimasho iyo dhaawac noqday askartii gaariga saarnayd.
Ugu yaraan sagaal (9) askari oo ka tirsan milatariga Kenya ayaa ku dhimatay qaraxan culus oo ka dhacay nawaaxiga deegaanka Boodhaay ee gobolka Laamu.
Gaariga oo ahaa nooca loo yaqaano Kooyalka ayaa gabi ahaan basdbeelay waxaana la sheegay in ay saarnaayeen 11 askari oo milatariga Kenyaan ah, kuwaas oo dhamaantood noqday wax dhintay iyo wax dhawacmay.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxa lagu laayay ciidamada Kenya sida ay baahisay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha.
Afhayeenka dhanka ciidamada Al-Shabaab Sheekh Cabdi Caziiz Abu Muscab oo la hadlay Idaacada Andalus ayaa sheegay in sagaal ka tirsan ciidamada Kenya ay goobta ku dhinteen, halka saddex kale ay dhaawacyo halis ah soo gaareen.
Ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku socdaalayay nawaaxiga deegaanka Boodhaay oo u dhowr kaymaha Booni ee gobolka xeebta Kenya ku yaalla ee Laamu.
Ciidamada Al-Shabaab ee saldhigyada ku leh gudaha wadanka Kenya ayaa dhowr jeer sidaan oo kale weeraro lagu dilay askar badan oo Kenyaati ah ka fuliyay gobollada NFD iyo Lamu oo ah laba gobol oo ay Muslimiintu leeyihiin balse ay Kenya xoog ku haysato.
Maalin kahor ayay ahayd markii booliska wadanka Kenya ay shaaca ka qaadeen in ay Geela gaadiid ahaan u adeegsan doonaan kadib markii gaadiidkii kale ee ay isticmaali jireen ay Mujaahidiintu miinooyin ku burburiyeen.
Ciidamada Kenyaatiga ayaa tan iyo markii ay duullaanka gumaysi doonka kusoo qaadeen dalka Soomaaliya sanadkii 2011 ayaa waxaa iyaguna gudaha Kenya u gudbay ciidama ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaas oo halkaas saldhigyo ciidan ka samaystay, fuliyayna weeraro waaweyn oo lagu xasuuqay ciidamada Kenya.